म नेपाली कांग्रेसमा लागेको भ्रममा नपर्नुसः मो. साजिद हुसैन, युवा नेता – doodhmati || dudhmati
Home / news / म नेपाली कांग्रेसमा लागेको भ्रममा नपर्नुसः मो. साजिद हुसैन, युवा नेता
Sujeet Jha July 6, 2018	news, बातचित 623 Views
प्र. जय नेपालको ठाउँमा जय मधेश भन्न थाल्नु भएको छ यसको पछाडिको कारण के होला ?
जय नेपाल मैले कहिले भनिन । हामीहरु संसदको चुनावमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई जिताउने अभियानमा मात्रै लागेका थियौँ । त्यो बेला पनि सम्बोधन गर्दा जय मधेश नै भन्ने गर्थेँ । मेरो राजनीति नै मधेशबाट शुरु भएको छ । मधेशलाई छोड्न सक्दिन ।
विमलेन्द्र निधि राष्ट्रिय नेता हुनु हुन्छ त्यस कारण उहाँको कार्यक्रममा गएको थिएँ । तर नेपाली कांग्रेसमा अहिले गएको छैन ।
प्र. विमलेन्द्र निधिको चुनाव पछिको कार्यक्रममा पनि तपाईलाई देखिएको थियो ?
विमलेन्द्र निधि राष्ट्रिय नेता हुनु हुन्छ त्यस कारण उहाँको कार्यक्रममा गएको थिएँ । तर नेपाली कांग्रेसमा अहिले गएको छैन । मलाई कांग्रेसमा लागेको भ्रममा नपर्नु होला ।
प्र. अहिले तपाईलाई कुन पार्टीको समर्थक भन्दा उपयुक्त हुन्छ ?
त्यस्तो कुनै पार्टीमा म छैन । राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनमा छु । त्यसको संगठन विस्तार लगायत अन्य कार्य गरिरहेको छु । चाँडै गठबन्धनमा मधेश शब्द थपिने छ र प्रदेश स्तरको संगठन बनाइने छ । यसका लागि विभिन्न सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय बुद्धिजीवी, मुस्लिम नेताहरुको भेला पनि गर्दैछु । प्रदेश २का आठवटै जिल्लामा चाँडै संगठन विस्तार गरिने छ ।
हामी मधेश मुद्दालाई लिएर अगाडी बढिरहेका छौँ । संजयजीले पनि यो पार्टीमा जाउ वा नजाउ केही भन्नु हुन्न । उहाँसंग जुन बेलापनि कुरा हुँदा मधेश मुद्दालाई नछोड्न सल्लाह दिनु हुन्छ ।
प्र. संजय साहले भने अनुसारको पार्टीमा तपाई जानु हुन्छ ?
त्यस्तो केही छैन । हामी मधेश मुद्दालाई लिएर अगाडी बढिरहेका छौँ । संजयजीले पनि यो पार्टीमा जाउ वा नजाउ केही भन्नु हुन्न । उहाँसंग जुन बेलापनि कुरा हुँदा मधेश मुद्दालाई नछोड्न सल्लाह दिनु हुन्छ । फेरी हामी मधेशका लागि यति कार्य गरेका छौँ छोड्ने कुरै आउँदैन । मधेशलाई अधिकार दिलाउन हरेक संघर्षमा सक्रिय भएर सहभागी हुने छौँ ।
प्रदेश सरकारको कामकाजबाट म सन्तुष्ट छु । अहिले ऐन, विधेयक तयार पार्ने लगायतका कामहरु भई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारसंग धेरै अपेक्षा राख्नु नै मुर्खता हुने छ ।
प्र. प्रदेश सरकारको कामकाजको चारैतिर आलोचना भई रहेको छ तपाई के भन्नु हुन्छ ?
प्रदेश सरकारको कामकाजबाट म सन्तुष्ट छु । अहिले ऐन, विधेयक तयार पार्ने लगायतका कामहरु भई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारसंग धेरै अपेक्षा राख्नु नै मुर्खता हुने छ । कामकाजका लागि अन्यौलता छ, संघिय सरकारबाट धेरै अधिकारहरु प्रदेशमा आउन सकेको छैन । यसका अतिरिक्त एउटा कुरा हल्ला फैलाइएको छ राजपा फोरम गठबन्धन रहँदैन त्यस्तो छैन । यो गठबन्धन रहिरहन्छ । मधेशको माँग पनि यो गठबन्धनले पूरा गराउन अगाडी बढ्ने छ ।
Tags मो. साजिद हुसैन
Previous जनकपुरक मेयर लालकिशोर साह निरंकुशताक पराकाष्ठा नाँघि देलन्हिः परमेश्वर साह, वार्ड अध्यक्ष जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ एवं कांग्रेस नेता
Next धनुषा जिल्लामे बाढिसँ मानवीय क्षति रोकबाक लेल रेडक्रस विशेष तैयारीमेः नरेश प्रसाद सिंह, सभापति नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा
August 15, 2017	25,985
March 8, 2017	4,709
June 7, 2018	4,389
May 21, 2017	4,001
July 8, 2017	3,974